अर्थ बाणिज्य – कालीगण्डकी पोष्ट
काठमाडौ - यसै हप्ता आइपीओ निष्कासनको लागि २ कम्पनी थपिएका छन् । यो सँगै आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरु २ दर्जन हाराहारी पुगेका छन् । खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ...
रिभर फल्स पावरको आईपिओ को विक्री खुल्ला
काठमाडौं । रिभर फल्स पावर लिमिटेडले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र सङ्खुवासभाका बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको...
सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारी
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । देशको आर्थिक अवस्था ध्वस्त पारेको तथा महत्वपूर्ण सूचनाहरु चुहाएको...
सुनको मुल्य बढ्यो आज कतिमा हुदैछ कारोबार !
काठमाडौं । सुनको भाउ बिहीबार पाँच सय रूपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार कायम भएको छ । यसअघि, मंगलबार सुन...
अब सहकारी संस्थाको पनि एटीएम कार्ड
काठमाण्डाै । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो पहिचानसहितको एटीएम कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै आफ्नो पहिचानसहितको एटीएम कार्ड जारी गर्दै आएकामा अबदेखि सहकारी संस्थाहरूले पनि...
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आईपीओ भोलीदेखी
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी शुक्रबारदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । संस्थाले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख २२ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो...
बढ्यो नेप्से: यी १० कम्पनिको शेयरमुल्य ६% ले बढी, कुनको कति?
काठमाण्डाै । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज साेमवार बढेको छ । नेप्से आज २६ दशमलव ४४ अङ्कले बढेर दुई हजार सात सय १५ दशमलव ३५ विन्दुमा पुगेको छ । आज...
नेपाल वायुसेवा निगमको व्याजदर घट्यो
अछाम। नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको हवाइ भाडा घटाएको छ । निगमले अछाम-धनगढी उडानमा १ हजार २५ रुपैयाँ भाँडा घटाएकाे हाे । अब भाडादर २ हजार...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले बढेको छ । शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक ५५।५० अङ्कले बढेर दुई हजार...